September 2015 - BuzzFeed Myanmar
ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ယောက်နဲ့ အတူနေထိုင်ခြင်းက သင်ကိုယ်တိုင် ဆေးလိပ်မသောက်သည့်တိုင် ဆီးချိုအမျိုးအစား ၂ ကို ရစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ ရှိမှုအသစ်တစ်ခုအရ သိရှိရပါတယ်။ ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေ့ တွေကိုရှူရှိုက်ခြင်းက အဆိုပါရောဂါရရှိမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေကြောင်း လူပေါင်း ခြောက်သန်း နီးပါးကို ဆန်းစစ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုပေါင်း ၈၈ ခု ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ယူလေ့လာပြီးနောက် တွေ့ ရှိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ကင်ဆာ ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေကို ရနိုင်ကြောင်း အထောက်အထားတွေ များပေမယ့် ဆီးချိုအမျိုးအစား ၂ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထားတွေကိုတော့ ပြသနိုင်မှုပိုင်းမှာ နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုလေ့လာမှုအသစ်ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကဆီးချိုဖြစ်ပွားမှု ၂၈ သန်းလောက်ဟာ ဆေးလိပ်သောက်မှုကြောင့် အဓိကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ The Lancet Diabetes & […]
ကိုယ်လက်ထပ်မယ့်သူဆီမှာ ရှာဖွေသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ
ယောကျာ်းလေးတွေအတွက် အိမ်ထောင်ဖက်မိန်းကလေးက အိမ်ထောင်မှုနိုင်နင်းရမယ်၊ မိန်းကလေးတွေ ယူမယ့်ယောကျာ်းက ပိုက်ဆံရှာတတ်ရမယ်။ ဒါတွေက အခြေခံအသ်ိတွေပါ၊ ဒါပေမယ့် အခုဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေပါ သူ့ဆီမှာရှိရင် ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်မယ့်လူလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါပြီ။ ၁. ကိုယ်နဲ့ယုံကြည်မှုချင်း မျှဝေနိုင်တဲ့သူ ကိုယ်က ဘိုးတော်ကိုပဲ ယုံယုံ၊ နတ်ကိုပဲ ကိုးကွယ်ကိုးကွယ် ကိုယ်ယူမယ့်သူဟာ ကိုယ့်အမြင်တွေကို လေးစားသူဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဘဝတလျှောက် လက်တွဲသွားတဲ့အခါ သည်လိုကိစ္စတွေက အဓိကပြဿနာဖြစ်စေတာပါ။ ၂. ကိုယ့်ကို အသစ်အဆန်း သင်ပေးနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ်သိတာကို အပြန်အလှန် သင်ကြားပေးနိုင်မှ ဘဝက ပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ ထမင်းစားတူကိုင်တာ၊ သံရိုက်တာ စတဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကို အပြန်အလှန်သင်ကြားပေးပါ။ ၃. ကိုယ့်ကို ယုံကြည်တဲ့သူ (သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ယုံကြည်ရတဲ့လူ) သူ့ဖုန်းကို ရှောင်တခင်စစ်ဆေးကြည့်သင့်တယ်လို့ ခံစားနေရရင် ကိုယ်ဟာ သူ့အပေါ် မယုံကြည်ရာရောက်ပါတယ်။ အဲသည်လိုဆက်ဆံေ၇းမျိုးဟာ […]
Sexting ဆိုတာကို လေ့လာမှုမှာပါဝင်တဲ့ သုတေသီတွေက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ (သို့) ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများကို မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းမှ တစ်ဆင့် စာသားမက်ဆေ့ဂ်ျ အဖြစ်ပေးပို့ခြင်း ၊ လက်ခံရရှိခြင်းတို့ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီတွေဟာ အမေရိက မှာရှိတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ အသက် ၈၂ နှစ်ကြားရှိတဲ့ လူဦးရေ ၈၇၀ ယောက်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ထိူ လူဦးရေ ရဲ့ ထက်ဝက်ခန့်ဟာ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီး ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ တစ်ကိုယ်တည်း သမား(Single) တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သုတေသီတွေဟာ ထို အစစ်ဆေးခံခဲ့သူတွေကို Sexting အမူအကျင့်တွေတင်မကပဲ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ၊ အချစ်ရေး နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေကိုပါ မေးမြန်းပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
ပျားရည်သောက်တော့မယ်ဆိုရင် နံက်စောစောအိပ်ယာထချိန်ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ ဘာအစာမျှမရှိတဲ့အချိန်ဟာ ပျားရည်သောက်ရန် အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ညစာမစားခင်နှစ်နာရီခန့်အလို နဲ့ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးချိန်တွေမှာလည်းသောက်ပေးနိုင် ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူတစ်ယောက်ဟာ ပျားရည်ကို တစ်နေ့လျှင် လက်ဘက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းထက်ပို၍ မသောက်သင့်ပါဘူး။ ဆေးညွှန်းပမာဏမှာ တစ်ကြိမ်သောက်တိုင်း ကြက်သီးနွေးခန့်ပူသော ရေနွေးဖြူ တစ်ဖန် ခွက်နှင့် ပျားရည်စစ်စစ်တစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း အရွယ်) ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းဖျော်ရည်ကို အကြာကြီး အအေးခံမထားသင့်ဘဲ ချက်ချင်းသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပျားရည်သောက်ရန် သင့်တော်သူများ (၁) နို့တိုက်မိခင်များ မီးဖွားပြီးစ နှင့် နို့ ချိုတိုက်ချိန်များမှာ ပျားရည်စားသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မီးဖွားပြီးစ သွေးသားနု ချိန်မှာ ပျားရည်ကို အရက်နှင့်ရော၍ သောက်ပါ။ အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာရာသီလာချိန်မှာလည်း ပျားရည်သောက်သင့်ပါတယ်။ (၂) ကင်ဆာ ရောဂါသည်များ […]